‘कथा काठमाण्डू’, ‘अनुराग’ र ‘छिरिङ्ग’ मध्ये कुन हेर्ने ? « Ramailo छ
‘कथा काठमाण्डू’, ‘अनुराग’ र ‘छिरिङ्ग’ मध्ये कुन हेर्ने ?
प्रकाशित मिति : Sep 28, 2018
यो शुक्रबार तीन नयाँ नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । संगीत श्रेष्ठ निर्देशित कथा काठमाण्डू, सत्यराज चौंलागाईं निर्देशित अनुराग र यश कुमार निर्देशित छिरिङ्ग एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । भिन्न भिन्न जनराका यी तीन फिल्महरु बारे छोटकरीमा चर्चा गरौं ।
गीत र प्रोमो रिलिजसँगै चर्चा र विवादमा आएको यो फिल्ममा शहरिया महिला हिंसाको कथालाई उठाइएको छ । जहाँ प्रियंका कार्की र प्रमोद अग्रहरीले मुख्य भूमिका निभाएका छन् । सँगै संजोग कोइराला, सन्ध्या केसी, आयुष्मान देशराज जोशी, प्रेक्षा अधिकारी लगायत कलाकारको अभिनय छ । सञ्चारकर्मी समेत रहेकी श्रेष्ठको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्मले तीन फरक फरक युवा पुस्ताको अवस्थालाई चित्रण गर्नेछ । संजोग र सन्ध्यासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले निर्माण गरेको फिल्ममा उनकी पत्नी एलिजा गौतम र नव नायक समुन्द्र पण्डितले अभिनय रहेको छ । सत्यराज चौलागाईंको पहिलो निर्देशन रहेको यो फिल्म म्युजिकल लभ स्टोरी फिल्म हो । एलिजा र समुन्द्रसँगै फिल्ममा सरोज खनाल, रुपा राणा लगायत अन्य कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । ऋषि धमला र एलिजासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
गायक तथा नायक यश कुमारको डेव्यु निर्देशन रहेको फिल्ममा यशसँगै निमा रुम्बा र कामना भुजेलको मुख्य भूमिका रहेको छ । अविकसित हिमाली भेगमा छिरिङले गर्ने संघर्षसँगै माया प्रेमलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ । फिल्मको बिहिबार प्रिमियर समेत गरिएको थियो । यश कुमारसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :